5 Fomba ivelan'ny toeram-piarovana hanatsarana ny seho amin'ny media sosialy - Fahatakarana avy amin'ny Semalt
Tianao ho tsara kokoa ny toeranao amin'ny milina fikarohana?
Manana tombontsoa amin'ny fampiasana fampitam-baovao sosialy ve ianao hampitombo ny fahombiazan'ny SEO?
Ny fampahalalam-baovao sosialy dia manana tombony goavana amin'ny valin'ny fikarohanao, ary aNy fitondrantena ara-tsosialy dia afaka manatsara ny toerana fikarohana.
Ao anatin'io fanoratana io dia Jason Adler, mpitantana ny Customer Success of Semalt Digital Services, dia manome fomba dimy, amin'ny alalan'izany, afaka mampiasa ny media sosialy ianao mba hanatsarana ny fikarohanao fikarohana.
# 1: Mametraka rohy amin'ny tambajotra sosialy
Tany aloha, ny laharan'ny Google dia mifototra amin'ny fananganana rohy na inona na inonaNy kalitaon'ny rohy izay heverin'ny olona iray. Taty aoriana, nanomboka nijery ny kalitaon'ny rohy i Google taorian'ny nahalalany izany olona izanydia nanamboatra laharam-pahamehana tamin'ny fampiasana rohy hosoka.
Koa satria tranonkala sosialy no miorina amin'ny solontenan'ny vohikala, ny rohy amin'ireo tranonkala ireo diaMatetika no heverina ho ambony kokoa - restaurant steel furniture. Na dia misy pejy Facebook vaovao aza, dia mety ho avo lenta loatra izanyNy fahefana feno an'ny Facebook.
# 2: Ampitomboina ny isan'ireo mpanara-dia anao
Tsara kokoa ny tranonkala ahitana mpanjohy tsara kalitaomilina. Ireo mpanaraka marobe ambony dia eo amin'ny sehatry ny media sosialy, ary misy maromaro amin'ireo olona ireo no mifandray na mandray anjarafomba sasany.
Ny resadresaka dia mety amin'ny endrika famerenana miverimberina ny votoatiny, ny fametahana ny pikantsary,manoratra fanavaozana ao amin'ny Google+ na mandefa bitsika anao mihitsy aza..Amin'izay, dia tadidio fa mihabetsaka ny isan'ny mpanara-dia anao.
# 3: Fantaro fa ny votoatinao dia azo ampifanarahana sy azo jerena
Tetik'asa ara-tsosialy toy ny Pinterest no mampiavaka ny fampahalalam-baovao anaokarohina. Ny sehatra dia manentana be dia be. Ny mpampiasa dia mametaka sary amin'ny fahalianan'izy ireo amin'ny biraony ary manaparitaka izany amin'ny hafaMpankafy Pinterest.
Ohatra, azonao atao ny mametraka ny hafatrao ao amin'ny Facebook mitady anaomotera amin'ny alàlan'ny fidirana amin'ny tabilao fametrahana ny tsiambaratelo ao amin'ny Facebook ary mamela ireo fitaovam-pikarohana hafa hampifandray ny fizotry ny fotoana.
# 4: Asio ireo teny fanalahidinao
Mora ampiasaina amin'ny tranokalanao, fanentanana dokam-barotra, ary bilaogy ny tenifototra, ary noho izany,Tsy tokony hahagaga anao fa ny dikany dia manan-danja amin'ny votoaty sosialy.
Ao amin'ny Pinterest, ny fomba azo antoka hananana toerana ambony kokoa amin'ny milina fikarohanadia ny mba hahazoana antoka fa manana ny teny fanalahidy ny boards na ny pints. Toy izany koa, ny fanaovana fikarohana ho an'ireo lahatsary YouTube dia mety hampitombo ny fifamoivoizana ao amin'ny bilaogy,fantsona, ary tranonkala raha asongadina ao amin'ny mombamomba anao izy ireo.
Amin'ny fampiasana teny fanalahidy ao amin'ny pejinao Facebook dia mety hitondra vokatra tsara kokoa.
Ny teny fanalahidy dia miantoka fa ny fijerinao dia azo takarina ary rehefa mitady ny mpampiasaHo an'ireto teny ireto, ny votoatinao dia ho voalohany amin'ny pop up.
# 5: Ataovy lisitra eo an-toerana
Asio antoka fa manana lisitra manokana ao amin'ny Google + izay manana anao ny orinasanaopifandraisana sy adiresy manan-danja. Izany dia ahafahan'ireo mpanjifanao manitsy ny fikambanananao mivantana amin'ny Google.
Ny fampiasana tambajotra sosialy toy ny fitsabahan'ny marketing dia tena azo ekena, faAfaka manatsara bebe kokoa aza izany amin'ny fampiasana azy hampivoatra ny SEO.
Azo antoka fa afaka manatsara ny laharana ny tranonkala sosialy.